House for Sale in Dagon Myothit (South) - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Houses for Sale in Dagon Myothit (South)
Township Dagon Myothit (South)
57 ရပ်ကွက် အိမ်နှင့်ခြံ အ​ရောင်း
Bank home loan ဖြင့်၀ယ်လို့ရပါသည် 🏠👍 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;...
1,250 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10032863
Baydar Real Estate Close
9,800 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10005994
Great Pyi Taw Thit Real Estate Close
🔺တောင်ဒဂုံမြို့နယ် Sony မြယမုံ အိမ်ရာဝင်း မြေကွက်နှင့် လုံးချင်းအိမ် အရောင်းများ🔺 📱09-250564430 nilar
1.မြေကွက် 90' 100'ဂရံ အမည်ပေါက်&lt;br /&gt; သိန်း 8500 &lt;br /&...
Ad Number S-9983078
290 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10038520
စိန်အိခိုင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Close
780 Lakh (Kyats)
Owner Direct Bank Installment
Ad Number S-10037554
🇲🇲🏠 တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်နေသော...
Ad Number S-10036480
ဒဂုံတောင် ၅၄ရပ်ကွက် အိမ်နဲ့ခြံအရောင်း
1,400 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10029002
ဒဂုံတောင် ၁၈ရပ်ကွက် အိမ်နဲ့ခြံအရောင်း
1,300 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10028562
Ad Number S-10028533
🙏မဂ်လာပါ🙏 🧂ရေသန့်လုပ်ငန်း လုပ်လိုသူများအတွက် ⛳အဆင်သင့်လုပ်နိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နေ ...
Ad Number S-10027624
LUCKY SEVEN (Real Estate) Close
တောင်ဒဂုံ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးနောက်ကျောမှ လုံးချင်းအရောင်း
Ad Number S-10015809
Myanmar Ray Real Estate Agency Close
တောင်ဒဂုံ အမှတ် ၂ လမ်းမကြီးပေါ်မှ ၄ထပ် RC လုံးချင်း
Ad Number S-10015527